Valley Lodge Miss Kitty Suite - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguJoeBen
Ukuhlala kwakho kuMiss Kitty yeyona ndawo yethu inkulu kwaye ibonisa ixesha lakudala lasentshona. Zive ukhululekile ukudlala i-poker okanye amakhadi anokufikelela kwibalcony engaphandle ejongene nentendelezo kunye negadi (ukutshaya kuvunyelwe ngaphandle). Kukho ibhedi yobukhulu bokumkani, igumbi lokuhlambela elinebhafu ye-jacuzzi (ihairdryer / izinto eziluncedo), imicrowave, iWi Fi, i-smart TV/Dish kunye neNetflix, umatshini wekofu, iiglasi zewayini xa uceliwe. Songa ibhedi egcweleyo ekhoyo.
I-Valley Lodge yalungiswa ngokutsha malunga ne-1863 Boarding House/Hotele. Umnini wakho yinzalelwane yaseTularosa, i-archeologist. UJoe Ben wemba ipropathi kwaye uya kufumana izinto zakudala azifumene phantsi kwemigangatho. Qiniseka ukuba ubuza malunga nokhenketho lwethu lokuhamba intaba kwimilambo emithathu, iSithili seMbali saseTularosa kunye neTularosa Basin. Emva kokwabelana ngesidlo sakusasa esipheleleyo, ungayishiyi i-Valley Lodge ngaphandle kokundwendwela iNdawo yethu entsha yeNdawo yeencwadi yembali yasekhaya kunye neentsomi zasemzantsi-ntshona. I-Valley Lodge yindawo yokuhlala entle kakhulu kwaye entle enemigangatho emitsha yamaplanga kunye nesilingi yeViga yesiko ukuba uyonwabele. Ndinqwenela ukubona.
Iintsuku eziyi-7 e Tularosa
Ilali yaseTularosa inobuhlobo, encinci, umoya wedolophu yasekhaya. Uninzi lwabahlali baseTularosa bayinzala esukela kubahlali bokuqala ukusukela ngeminyaka yoo-1860. Ilali yaseTularosa izinze kumakhaya eMescalero Apache Tribe. Kumntla-mpuma unokubona iSacramento Mt. Range ehlala iLincoln National Forest. Ngasentshona kukho i-White Sands Missal Range kunye nekhaya kwi-Stealth Fighter Wing e-Holloman AFB. Buza uJoe Ben malunga nokhenketho lwakhe.
Umbuki zindwendwe ngu- JoeBen
UJoe Ben Sanders uhlala kwindawo.